We.com.mm - ရွှေမြန်မာတို့အကြိုက် သရေစာ ( ၅ ) မျိုး
သူများတွေက ဘယ်နိုင်ငံကအစားအသောက်ဘယ်လိုကောင်းတယ် …။ ဘယ်လို အာတွေ လျှာတွေ တွေ့တယ်ရေးနေတော့ အနော် လည်းအစားအသောက်အကြောင်းရေးချင်လာရော …။ ဒါပေမဲ့ အနော် ကမြန်မာဆိုတော့လေ …. မြန်မာအစားအစာပဲကြိုက်တာပေါ့ဗျ .. နော် …။ သဘောပါကြသလား အောဖျန့်တို့ ...။
ကဲ …. အများသိကြတဲ့အတိုင်း …၊ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း မှာ လက်ဖက်ကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ် …။ လက်ဖက်ကိုသေချာထောင်း .. ဆီလေးအုပ်ပြီး .. ဘူးကြီး ဘူးငယ်လေးတွေနဲ့စိမ်ထားတာ …။စားခါနီးပြီဆိုရင် ချဉ်ငံစပ် အရသာအစုံအုပ် …၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ ..ဂေါ်ဖီထုပ်တို့လှီးထည့် …၊ မြေပဲဆံ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးအုပ် …၊ ပြီးရင်ဘေးနားက ရေနွေးပူပူလေးနဲ့တွဲ ….၊ ကဲ …အဲထက်ကောင်းတာရှိဦးမလား …။
နွေရာသီနေ့လည်ခင်းအိမ်မှာအပျင်းပြေဝိုင်းဖွဲ့လုပ်စားကြသလို .. မိုးတွင်းနဲ့ဆောင်းရာသီမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအခိုးတွေပါပွင့်ထွက်သွားမယ့် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အရသာလေးနဲ့ပေါ့ …။ ထမင်းနဲ့တွဲဖက်စားလို့ရတဲ့အပြင် သရေစာအဖြစ်လည်းစားလို့ရတာမို့ လက်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးမြန်မာ့အစားအစာတွေထဲကတစ်ခုပါ …။ လက်ဖက်မကြိုက်ဘူးပြောမယ့်သူရှိလား ..။ မြန်မာပဲဗျာ ..၊ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဖက်သုပ်ကို မကြိုက်တဲ့သူ ဘယ်ရှိမတုံး …။ ဟုတ်သလား ..??
နောက်တစ်ခု … အဲဒါက ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ရိုးရာလို့ပြောတာထက်စာရင် ရှမ်းအစားအစာလို့ပြောရင်ပိုကောင်းမယ် …။ ကျောင်းသားဘဝ ၉ တန်း ၁၀ တန်းကစလို့ အခုထိလည်း အဲဒီအစားအသောက်လေးကို စွဲစွဲမက်မက်ကြိုက်တုန်း .. စားတုန်းပဲ ….။ ထမင်းကို အာလူးတို့ …ငါးကြင်းအသားလွှာပါးပါးလေးတွေနဲ့နယ် …၊ အပေါ်ကအချဉ်အငံလေးသမအောင်ထည့် ..၊ ထပ်ပြီး သမအောင်နယ် …၊ ပြီးမှ ဂျူးမြစ်တို့ …၊ ပဲပင်ပေါက်တို့ ..၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ .. ဆီချက်တို့ ခပ်ပါးပါးအုပ် …၊ မြေပဲဆံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ဆီ တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့အချဉ်လေးဆမ်း ….နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဝက်သားကြော်အနေတော်ခပ်ထူထူလေး တစ်တုံးလောက် ပစ်တင်ပလိုက်စမ်း …။ ကောင်းမှကောင်းဆိုတာဒါမျိုးပြောတာဗျ …..။
အလှူပွဲ …၊ သာရေး နာရေးတိုင်းမပါမဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ စားစရာ တစ်ခု …။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစားစရာတွေထဲကတစ်ခု …၊ အိမ်မှာမုန့်ဟင်းခါးချက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ ဟင်းရည်ချည်းပဲ ခပ်သောက်တာဗျား။
ဟင်းရည်က ရေချိုငါးခူတို့ .. ငါးမြစ်ချင်းတို့ နဲ့ဆိုပိုကောင်း … ။စပါးလင်အနံ့သင်းသင်း … ငရုတ်ကောင်းနဲ့ ငါးရဲ့အချိုအရသာ …၊ ပြီးတော့ ဌက်ပျောအူဖတ်ခပ်ကြီးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ကာ ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့သွားရည်ကျလာပြီ …။ စားခါနီးမုန့်ဖတ်ထည့် ….၊ ဟင်းရည်မွှေပြီးထည့် .. ပဲသီးအနေတော်အပိုင်းလေးတွေဖြတ်ထားတာလေးတွေ ကောက်ထည့် … ။ငရုတ်သီးမှုန့်ခပ်ရဲရဲ …. ဆီချက်လေးဆမ်း …. ပြီးရင်ပဲကြော်ထည့်ချင်လား …? ဗူးသီးကြော်လား …? ဒါမှမဟုတ်အိုးဘဲဥလား …? ကျွန်တော် ကတော့ အိုးဘဲဥ Crazy ဆိုတော့ကာ .. မုန့်ဟင်းခါးစားပြီဆို အိုးဘဲဥ နဲ့နှစ်ပွဲအဝစားရမှ။ ပြီးရင် ဟင်းရည်ပါတောင်းလိုက်သေး ….။ ကင်မ်ချီ ကြိုက်တဲ့ ကိုကိုတွေ … ကိုရီးယားထမင်းလိပ်တို့ … KFC တို့မှစားပါတယ်ဆိုတဲ့ မမတွေ ..၊ မနက်တိုင်းမုန့်ဟင်းခါးအကြော်အမျိုးမျိုးနဲ့ အဝဆွဲပြီးမှ ရုံးတက်ကြတယ်တော့လုပ်လိုက် … ။
ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်မှာ ရှမ်းစာအမျိုးမျိုးရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ် … ။
ဆန်စေးခေါက်ဆွဲထဲကို မြေပဲဆံတို့ …၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ …၊ ဝက်သား ဒါမှမဟုတ် ကြက်သားအဖတ်လေးတွေ ထည့် …၊ အပေါ်ကနေငရုတ်ဆီ နဲ့ မြေပဲရောထားတဲ့ စားမြိန်စာလေးဆမ်း …..၊ ဟင်းချိုပူပူလေးတစ်ခွက်ရယ် ကြံမဆိုင် ..၊ ဥနီ ..၊ ဥဖြူ ကိုအချဉ်တည်ထားတဲ့ ရှမ်းချဉ်လေးတစ်ပွဲရယ်ဆို …၊ ပြည့်စုံတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီပေါ့ …။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရိုးရာအစားအစာတော့ပြောမရဘူး …။ ဒါပေမဲ့နေ့စဉ် ..၊ ဒါမှမဟုတ် ..၊ နေ့စဉ်နီးပါး ..၊ ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် …၊ အပြင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် …၊ သူငယ်ချင်းတွေစုမိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် …၊ တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ..၊ ဘယ်လိုပဲစားစား အာတွေ့တဲ့အစားအသောက်ကတော့ ဝက်သားတုတ်ထိုးပဲ …။ ပြောစမှတ်လည်းရှိတယ် …။ စားပြီးရင်းစားချင် …၊ စားနေရင်းနဲ့လည်းပါးစပ်ကိုဘရိတ်အုပ်ဖို့ခက်ပါ့ ..။
ပူပူနွေးနွေး ဝက်သားတုတ်ထိုး တွေတင်ထားတဲ့ စားပွဲနဲ့ ဟင်းရည်အိုးကိုဝိုင်းပြီးထိုင် …၊ အနေတော်တုံးထားတဲ့အတုံးလေးတွေထဲကမှ သုံးထပ်သားဆူဆူလေးတွေ …၊ ကောက်ညှင်းအစာသွတ်ထားတဲ့ အူဖတ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးတွေ …၊ အသားဖတ်လေးတွေ ..၊ နောက်ပြီး နားရွက်တို့ …၊ အသည်းတို့ .. လျှာတို့ …၊ တစ်ဖတ်လောက်ယူလိုက် …၊ ဘေးနားကအချဉ်ထဲနှစ် …၊ ပါးစပ်ထဲ ပလွတ်ဆိုထည့် …၊ ငရုတ်သီးလေးတစ်ကိုက် ကိုက် …၊နောက်ပြီး ဟင်းရည်ချိုချိုပူပူလေးကိုရှူးရှဲနဲ့မှုတ်ပြီးသောက်လိုက်စမ်း …။
စွန်းကောင်းဒယ် ဆိုတာ အာ့ကိုပြောဒါ ..။
နာမည်ကြီးနေတဲ့ Green Tea Lava Cake လုပ်နည်း
ဆီချက်မပါပဲ တမာချဉ်ဖက် ချဉ်စပ်သုပ်လေးလုပ်စားမယ်
သင်္ဘောသီး ဖျော်ရည်တစ်ခွက်က သင့်ခန္တာကိုယ်ကို ဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်လဲ?
26 days ago by Psyche
တစ်ပတ်အတွင်း ၁၀ ပေါင်လောက်ကျစေမယ့် Detox Drink (၃) မျိုး…။
25 days ago by Psyche
နာမကျန်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် အခုလိုအချိန်မှာ ရှောင်သင့်တဲ့အစားအသောက်တွေ
10 months ago by June Nine Aung
Endgame မှာ ကပ္ပတိန်အမေရိက က ဘာလို့ သောရ်ရဲ့တူကြီးကို ကိုင်နိုင်ခဲ့တာလဲ?
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ ဗိုက်ချပ်စေမယ့် နည်းလမ်း (၁၂) သွယ်
6 months ago by Paulina
၄ နှစ်ကြာရပ်နားခဲ့ပြီးမှ Kpop လောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်လာခဲ့တဲ့ Sulli